Guiyang Zhongshuge Ivenkile Yeencwadi - Imagazini yoyilo
Ivenkile Yeencwadi Ngemigca yeentaba kunye neefolactite ezinomgangatho obonakalayo wevenkile, ivenkile ethengisa iincwadi yazisa abafundi kwihlabathi lomqolomba weKarst. Ngale ndlela, iqela loyilo lizisa amava obukekayo obonakalayo ngelixa kwangaxeshanye lisasaza iimpawu zendawo kunye nenkcubeko kwisihlwele esikhulu. I-Guiyang Zhongshuge ibisisiko lenkcubeko kunye nokuma komhlaba kwidolophu kwisixeko saseGuiyang. Ukongeza, iyawuvala umsantsa wobume benkcubeko eGuiyang.
Igama leprojekthi : Guiyang Zhongshuge, Igama labayili : Li Xiang, Igama lomthengi : X+Living.
Ivenkile Yeencwadi Li Xiang Guiyang Zhongshuge